Fantaro ny momba 'Snyder Cut' an'ny Ligin'ny Justice Zack Snyder - Vaovao Ambony
Fantaro ny momba an'i Snyder Cut ao amin'ny Ligy Justice Zack Snyder
The Snyder Cut of Zack Snyder Ny Ligin'ny Justice no fanapahan-kevitry ny talen'ny 2021 amin'ny Ligy Justice 2017 superhero amerikana. Mampiseho Justice League, sarimihetsika fahadimy ao amin'ny DC Extended Universe (DCEU) sy ny tohin'ny Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), araka ny nokasain'ny tale Zack Snyder talohan'ny nandaozany ilay tetikasa.
Warner Bros. Pictures' Justice League, izay navoaka tamin'ny 2017, dia nanana famokarana henjana. Teo anelanelan'ny taona 2016 sy 2017, ny script dia nandalo fanavaozana lehibe teo aloha sy nandritra ny famokarana. Taorian'ny fahafatesan'ny zanany vavy tamin'ny Mey 2017, dia niala i Snyder nandritra ny famokarana ary nosoloina Joss Whedon, izay nahavita ny sary ho talen'ny tsy nahazoan-dalana.
Raha faly amin'ny famakiana hafa ianao dia manana izahay Vanim-potoana voaozona 2 ho anao amin'ny laharana.
Notarihin'i Whedon ny famerenana sy ny fanitsiana hafa izay nahitana feo mamiratra kokoa sy vazivazy bebe kokoa, ary koa ny fampihenana lehibe ny fotoam-pihodinana ho fanarahana ny torolàlana Warner Bros. Ny famotsorana an-tsehatra an'ny Justice League dia nahazo tsikera ratsy ary lasan'ny baoritra, nanosika an'i Warner Bros. handinika indray ny hoavin'ny DCEU ary hifantoka amin'ny fananganana sarimihetsika manodidina ny olona tsirairay fa tsy tantara ifampizarana.
Inona nyMomba ny Ligy Justice an'i Zack Snyder?
Darkseid sy ny tafiny Parademon dia manandrana mandresy ny tany amin'ny alàlan'ny boaty Reny telo dimy arivo taona lasa izay. Nandresy azy ireo ny fiaraha-mientan'ireo andriamanitra taloha, Amazons, Atlanteans, olombelona ary Green Lantern[b], namela ny Reny Boxes, izay nafenina mitokana. Amin'izao fotoana izao, ny fampahavitrihana ny Boxes dia nateraky ny fahafatesan'i Superman[c], nitaona an'i Steppenwolf, lietnà afa-baraka an'i Darkseid. Te-hahazo sitraka amin'i Darkseid indray i Steppenwolf amin'ny fanangonana ireo boaty ao amin'ny The Unity, izay hamolavola ny tany ho dika mitovy amin'ny Apokolips, ny tontolo niaviany.
Niady tamin'ny Amazons tao Themyscira i Steppenwolf ary nisambotra ny Reny Box, izay ambenan'izy ireo. Diana Prince dia nampitandreman'ny Amazons, avy eo nandre ny fanafihan'i Darkseid teto an-tany sy Steppenwolf, ary nampahafantatra an'i Bruce Wayne. Te hanangana ekipa metahuman izy ireo mba hitahiry ny planeta. Rehefa tsy nahasarika an'i Arthur Curry i Bruce, dia nitady an'i Barry Allen i Bruce, fa i Diana kosa nitady an'i Victor Stone.
Tsy nety niditra i Victor raha tsy i Silasy rainy sy ny S.T.A.R hafa. Nalain'ny Parademons an-keriny ny mpiasan'ny laboratoara mitady ny boaty Reny miafina olombelona. Steppenwolf naka an-keriny sy namono ny mpiambina ny Atlantean niambina ny Reniny boaty, Mera sy Arthur misalasala ihany no namela azy.
Ny kaomisera polisin'ny tanànan'i Gotham James Gordon dia manome vaovao izay mitarika ny ekipa ho any amin'ny miaramilan'i Steppenwolf amin'ny toby ambanin'ny ranomasina. Na dia eo aza ny famonjen'ny mpiasa an-keriny ireo mpiasa nalaina an-keriny, dia tondraka ny trano, nitazona azy ireo mandra-panampian'i Arthur azy ireo handositra. Hitan'i Victor ny boaty Neny farany nafeniny. Nohazavainy fa ny Boxes dia afaka mandamina ny raharaha araka ny baikon'ny tompony, manambara fa nampiasaina hanamboarana ny vatany taorian'ny lozam-pifamoivoizana.
Tamin'ny 17 Novambra 2017, navoaka tamin'ny teatra ny Justice League. Nomena anarana hoe sarimihetsika Frankenstein avy amin'ny mpitsikera izy io, satria mazava ho azy fa asan'ny tale roa manana fomba fijery mifanohitra. Deborah Snyder sy ny mpamokatra mpanatanteraka Christopher Nolan dia namporisika an'i Snyder tsy hahita an'io sarimihetsika io na oviana na oviana taorian'ny nahitany ny dikan-tenin'i Whedon tamin'ny faran'ny taona 2017, satria fantany fa handratra ny fony izany. Na dia teo aza ny tetibola 300 tapitrisa dolara, nahazo 657,9 tapitrisa dolara ny Justice League.
Hisy ve ny Agent's Marvel ao amin'ny S.H.I.E.L.D. Vanim-potoana faha-8?
Daty famotsorana ny Masamune Kun No Revenge Season 2: Rahoviana no ho voalohany?
zoom ho an'ny Windows windows 10
reddit live xbox code reddit
showtimeanytime com mampihetsika kaody roku
misy tranokala ho an'ny kik
ahoana ny fomba hampiasana ny tv youtube